Articles - Sunuwar.org
अख्तिायार प्रकरणको लेख / भ्रष्टहरु खुशी नभए हुन्छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुद्ध व्यबस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि एकथरी मानिसहरु खुशीले छमछमी नाच्न थालेका छन् । कोही सिंहदरबार भित्रै नाच्छन्, कोही सिंहदरबारको गेटमै बसेर नाच्छन् । सिंहदरबारबाट बाहिरिन लागेकाहरु, भित्रिन लागेकाहरु, बानेश्वर, बालुवाटार, थापाथलीमा केही मानिसको खुशीको पारो यति बढेको छ कि यस्तो खुशी हिजोका दिनमा शान्ति मन्त्रालयबाट चेक बुभmेर बाहिरदा पनि त्यस्तो खुशी देखिएको थिएन । बास्तबमा यस्तो खुशीयाली किन ? उनीहरुको एउटै जवाफ छ, ‘लोकमानले हामीलाई पुर्जी काट्न लागेका थिए । अब हामीलाई पुर्जी काट्न नपाउने भए ।’ यसको साझो अर्थ के हो भने– ‘अख्तियारको संभावित छानबीनबाट उन्मुक्ति भयो ।’
अख्तियार प्रमूख कार्की ठीक छन् कि छैनन्, यो कलमजिवीको त्यति चासोको बिषय होइन । चासो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको गरिमा र स्वायत्तताको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई केही अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि उठाउन खोजेको पाईन्छ । ट्रान्सपेरेन्सी नेपालले पनि यो प्रश्न उठाएको छ । उस्ले भ्रष्ट्रचार बिरुद्धको अभियानमा सरकार असहयोगी भएको र विधिको शासनको पालना गराउन सहयोग नगरेको तथा स्वतन्त्र र टतस्थ अख्तियारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्बाह गरेको घुमाउरो भाषामा भनेको छ । यस्ता प्रतिक्रियाहरुले पनि लोकमान बिरुद्ध सिंगो राज्यसत्ता खनिनुको पछाडिको पृष्ठभूमि र अन्तरनिहित उदेश्यहरुका बारे बताईरहेको छ ।
लोकमान फेरि अख्तियारको कुर्सीमा फर्कन्छन् कि पाइलट बाबाको आश्रममा जान्छन्, त्यो त्यति महत्वको बिषय होइन । महाभियोग प्रकरण पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि संबैधानिक निकायको रुपमा पुनर्ताजगी प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न चाही मूल प्रश्न हो । अहिलेको संसदले अख्तियार नै खारेज गर्न पनि सक्छ । किनभने सार्वभौमसत्ता नै उसको हातमा छ । तर, देशमा कायम रहेको भ्रष्टचार त्यसमा पनि राजनीतिक भ्रष्टचार कसरी न्युन गर्ने कुरा चाही जनस्तरमा देखिएको मूल चासो हो ।
अध्ययन प्रतिबेदनहरुका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको सघनता राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक र विश्व बैंकद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकको आधारमा पनि राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारले कसरी व्याप्त पारेको बुझन सकिन्छ । विगत एक दशकभन्दा लामो आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यका अंगहरूको शासकीय क्षमता र प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर भएको अनुसन्धाहरुको निचोड पाइन्छ । मूलतः राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्तियार लगायत स्वतन्त्र निकायमा बढ्दो हस्तक्षेपले पनि यो क्रमको पारो बढाएको छ । अहिले लोकमान बिरुद्धको अभियान उसैको सिलसिला हो । सडकमा लोकमान बिरुद्ध नारा लगाउनेहरु त्यही भ्रष्टचारका मतियारबाहेक केही पनि होइनन् ।
नेपालको संविधान २०७२को प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारी बिरुद्ध महाभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक व्यबस्था छ । व्यबस्थापिका–संसद खास गरेर अव गठन हुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको बिशेषाधिकारका रुपमा योे व्यबस्था गरिएको पाईन्छ । अहिले माओबादी केन्द्र र नेकपा एमालेका गरी १५७ जना प्रतिनिधिसभाको समेत काम गरिरहेको साँसदहरुले संविधानको यो व्यबस्थाको जगमा महाभियोग दर्ता गरेका छन् । यति मात्र किन नि संविधानको व्यबस्था अनुसार तीन जना सदस्यले पनि सूचना गर्न सक्ने संवैधानिक व्यबस्था छ । तर संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार यो व्यबस्था कसैलाई मन नपर्ने बित्तिकै वा कुनै प्रकारको इच्छा जाग्दैमा प्रयोग गर्न सकिने भने होइन । Read the rest of this entry »
राजनैतिक घटना,दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वयम हामी नागरिक
-Jesho mi Koinch
सुगम ठाउँमा बस्ने उच्च राजनैतिक गल्लाहरु गाउँ पस्छन र चेतना भएकालाइ एकातिर अर्ध चेतना भएकालाइ अर्कोतिर अनि चेतना नै नभएकालाइ एकातिर पारेर मानसिकता नाप जाच गर्छन।चेतना भएकालाइ आफ्नो हात्तिको देखाउने दात जस्तो वाद र विचार पोत्न थाल्छन।अर्ध चेतना भएकालाइ आधा सपना देखाउछन। चेतना नै नभएकालाइ दैवी शक्तिको पौराणिक मन्त्र सुनाउछन। र लुटतन्त्रको सुनको ढोका खोल्न सफल हुन्छन। हामी र हाम्रो हैसियत किन लथालिङ्ग भयो र विश्व समुदाय माझ विचित्र को देखिन थाल्यो भनेर हामीले कहिल्यै सोच्न सकेका छैनौँ। मिठा मिठा कुरा सुनेर मख्ख पर्नेको जमानामा आधुनिक शिक्षा द्वारा दिक्षित युवा जमात पनि मीठो शब्द ओकल्ने र फड्कार्ने जिव्रो को पछि लाग्न थाले पछि हाम्रो परिवेश एक समयसम्म लोक कथा सुन्नमै व्यतित हुने पक्का छ। विज्ञानको बिषय पढ्दा सिसाकलम र खालि कागजमा प्रयोगशाला निर्माण गरे जस्तो नेपाली राजनीतिको माहोल र यस्को प्रयोग पेन्सिल आर्ट भन्दा फरक छैन।राज्य केही समयसम्म जनयुद्दको मारमा रुमल्लियो। जनुयुद्दकाल मा राज्यको पहुचबाट पर हुन पुगेका स्थानहरु मा हिजोआज खिइएका ग्रीनेड,बम पाइन थालेको छ।आतसतायी जनयुद्द पछि पनि देसमा अमन-चयन कायम हुन सकेन।हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या वेरोजगारी समस्याको हल निस्कन सकेन। विश्व समुदायले आजको युगलाइ मेसिनको युग भन्दै गरेको यो अवस्थामा हाम्रो देस लोडसेडिङको अध्यारो तर्फ उन्मुख हुँदै गयो। वजार अव्यवस्थित हुन पुग्यो। आफ्नो नागरिकको हितको लागि भनेर जिम्मेवारी पाएका हरेक व्यक्ती,तहतप्का र राजनैतिक दलहरूले हरेक सामानलाई महङ्गाई को उचाइ मा पुर्‍यै दिए। कष्टकर बन्दै गएको हाम्रो दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्न अब अर्को आधा शताब्दी लाग्ने निस्चित प्राय भैसक्यो।यति हुदाहुदै पनि हामीले आफ्नो आत्म निर्णयलाई प्रवल र प्रभावकारी वनाउन सकिरहेका छैनौं।र अर्को कुरा आफ्नो राष्ट्रको लागि भनेर हृदय देखि सोच्न सक्ने समय राज्य र राजनैतिक दलहरूले हनन गरिदिएका छन। यस्को कारक तत्व उनीहरुद्वारा हिप्नोसिस गरिएका केही युवा जमात नै हुन। विश्व अर्थतन्त्रको सामु निरीह हाम्रो अर्थतन्त्र राजनैतिक अदुरदर्सिता कै कारण कम्जोर हुँदै गएको छ। अनुदान मागेर,रिण मागेर अर्थतन्त्र कहिल्यै सबल हुदैन।आफूसंग पर्याप्त स्रोत र साधन हुदाहुदै लाखौं जनशक्ति हुदाहुदै पनि राज्यको नीति दिन प्रतिदिन निस्कर्सहिन र अपारदर्शी हुँदै गएको छ। राजनैतिक दलहरूको असक्षमता आजको परिस्थिति हो। कुनै पनि देसको सह अस्थित्व स्विकार्नु अर्को नियती हो। भारत जस्तो बर्सेनि हजारौं कृषले असफलता कै कारण आत्महत्या गर्ने परिस्थिति भएको र भ्रष्टाचारको मुल उद्गम विन्दु भएको देससंग सहकार्य गरेर नेपाल कहिल्यै उभो लग्न सक्दैन।जस्को आफ्नै देसमा छिट्फुट गृहयुद्ध संचालन भैरहेको छ,जस्को आफ्नै करोडौं नागरिक वेरोजगारी समस्याले पिल्सिएका छन,जहाको अर्थतन्त्र निस्चित पहुच भएका व्यक्तिमा निर्भर छ तेस्तो मित्र राष्ट्रसंग हातेमालो गरेर सम्वृद्दिको सपना देख्न सकिन्न।हामिलाइ अहिले वहुराष्ट्रीय कम्पनी को लगानी को व्यापक खाचो छ।हाम्रो उत्पादनलाई विश्व वजारसम्म पुर्‍याउन भारत र चीन बिचको उपस्तिथि मा सन्तुलन चाजिएको छ। नेपाली बजार र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न छिमेकी दुई देसको समान तर प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति हुन जरुरी छ। भारतिय एकाधिकार हाम्रो लागि सधैं हानिकारक छ। यी सबै हुनुमा हाम्रा राजनैतिक दलहरु सत प्रतिसत जिम्मेवार छन।उनीहरुको हैकमवादलाइ फलाउन फुलाउन हामी सधैं उनीहरुले दुतको रूपमा पठाएको राजनैतिक गल्लाको महत्वाकांक्षी योजना सक्रिय हुन्छौँ। कुनै पनि विचार र वाद राम्रो मानेर स्विकार्नु आत्माधिकार को विषय हो। कुनै पनि राजनैतिक दलमा आवद्द हुनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। तर तेहि कार्यले सिङ्गो राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी हुनु र वहुसंख्यक नेपालीले समस्या झेल्नुलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र तेस्तो खाले आत्मनिर्णयले सान्त्वना दिन सक्दैन।नागरिक भए पछि नागरिकको कर्तव्य पनि हुनुपर्छ। आफुलाइ कुन ठिक लाग्छ र कुन वेठिक लाग्छ भन्नु भन्दा पनि कुन दुरदर्शी र प्रभावकारी छ भनेर सोच्न सक्नु नै सक्षम नागरिक को कर्तव्य हो। राजनैतिक असक्षमताको पराकाष्ठा नाघ्नु राजनितिको दोष होइन। तेस्लाइ नागरिक को लापरबाही र उद्दण्डता सम्झदै ठिक होला। नत्र एक पटक प्रदुषित भैसकेको व्यक्ती सोहि पद/स्थान/निकायमा पुन आएर पुरानै गल्ती गर्नु कस्को गल्ती हो? राष्ट्रको इज्यत मै दाग लाग्ने गरि सार्वजनिक पद मा आसित भएर कुकार्य गर्ने अनि कानुनको झन्झट बाट जोगिन आफ्नै सार्वभौमिकता र वहुसंख्यक नेपालीको संरक्षक मानिने कानुनकै प्रयोग गरेर अर्कै देसको नागरिकता ग्रहण गर्नु कस्को दोष हो? के यस्तो परिस्थितिमा खवरदारी गर्ने कर्तव्य हाम्रो हुदैन?
दसै वहिस्कार गर्नु भन्दा…
-Jesho mi Ngawach
दसैको विवाद भैरहेको वर्तमान समयमा हामीले के बुझ्न खिजेका छैनौ भने दसै वहिस्कार या नमान्ने कुरामा भन्दा दसैलाइ दसै किन भनियो भनेर पहिला प्रस्न गर्न जरुरी छ। दसै किरात भुमिमा मौलाएको हिन्दु सस्कृती हो। यस्लाइ किरातहरुको पर्व होइन भन्ने आधार धेरै छन। तर दसैको मात्रै कुरा गर्दा हाम्रो मौलिक र प्राकृतिक किरात पर्व ओझेलमा पर्दछ। किरातहरु युद्द र युद्दबाट विजयी भएर कुनै पर्व मनाएको पाइदैन। युद्दकला को वर्णन गरिए पनि धेरै जसो आफू कहाबाट आएको? हामी के थियौँ? हाम्रो इतिहास के हो? हामीले के गर्नुपर्छ? आदि इत्यादि ऐतिहासिक घटनाक्रम को मात्रै वर्णन किरात सस्कृतिले गर्छ। तेसैले दसै वहिस्कार गर्नु भन्दा आफ्नो वास्तविकतालाई नै पहिला एकिन गर्न जरुरी छ।
दसै आफैमा विजय पछि मनाइने उल्लासमय चाड हो। यस्को प्रकृति हेर्दा यस्तै लाग्छ।रगतकै खोला बगाएर रगतले नै विभिन्न स्थान रङ्गाउने अनि अस्त्र प्रदर्सन गर्नु दसैको मौलिकता हो। यो क्षेत्रीय परम्परा हो। अर्कोतिर हामी किरातिहरु प्रकृतिको उपासक हौँ। यस्मा दुइमत छैन।पित्री र प्रकृति पुज्नु नै किरात को प्रमुख पहिचान हो। अन्नबाली लगाउदा, अन्नबाली स्याहार्दा हामी किराती खुसियाली मनाउने गर्दछौँ। यस्तै हिन्दु सस्कृती दसै र किरात सस्कृती फसल भित्र्याउने पर्व एकै समयमा पर्दछन। किरात भुमीमा हिन्दु सस्कृतिको आगमन पछि मात्रै भएको इतिहासले एकिन गरिसकेको छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि हिन्दु सस्कृती दसै किरात सस्कृती अन्न भित्र्याउने पर्वसंग मिसिएको भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। हिन्दु धर्म अनुयायी सासकहरुको धएअपकड को कारण दसैसंग मिसिन पुगेको किरात प्राकृतिक पर्व हिन्दुकरण हुँदै गयो। नेपाली भाषी साहित्यकारहरुको लेखहरुको आसय हेर्दा,बुझ्दा हामीले यो निस्कर्स निकस्ल्न समय लगाउनु हुन्न कि हिन्दु सस्कृती अरु सस्कृतीको अस्थित्वमा धावा बोल्न कुनै पनि हालतमा पाछी पर्दैन थियो।तेस मध्य किरातहरुको प्रमुख चाड हिन्दुकरण हुन थाले। मानिस एकैपटकमा मानिस हुदैन। उ मानिस हुन पहिला कुनै समुदायको एउटा सदस्य हुन्छ अर्थात उ पहिला कुनै जातिको सदस्य हुन्छ।फरक फरक जाती समुदायको मिलन नै सद्भावयुक्त समाज हो। तेसपछी मात्रै उ कुनै देसको नागरिक हुन्छ।उसलाई त्यहासम्म आइपुग्न धेरै नीति नियम अबलम्बन गर्न आवस्यक हुन्छ। आफ्नो सस्कृती,भाषा र सभ्यताको पाठ उसले राम्रोसँग अंगिकार गरेको हुनुपर्छ। सस्कृती,भाषा मध्य कुनै पनि एक पक्ष नभएको खण्डमा तेस्तो मानिस घुमन्ते हुन्छ। उस्को समाज हुन्न।राष्ट्र हुन्न।कुनै पनि जाती समुदायको अस्थित्वलाई सखाप पार्न त्यो समुदायको सस्कृती तहसनहस पर्न जरुरी हुन्छ। किन कि सास्कृतिक अतिक्रमण छिटो माध्यम पनि हो। यहि रणनीति लागू गरेर हिन्दु सज्कृतिले किरात सस्कृती माथी अतिक्रमण गरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस अर्थमा किरात पर्व जहाको तेहि छ। समय उस्तै हो। परिस्थिति र परिवेश उस्तै हुन। जहाँ अहिले दसै विराजमान छ। किन कि किरातिहरु वालिनाली भित्र्याउदा भव्यताका साथ खुसियाली मनाउने गर्दछन। किरातिहरुले आफ्नो गोठमा उत्पादन गरेको दहि र नया चामल मुछेर निधार भरी टीका लगाउने गर्दथे। यो मनगढन्ते तर्क होइन। समय, रिति र प्रकृतिको नियमलाइ बुझ्दा यस्तो हो भनेर भन्न सकिन्छ। अझैसम्म पनि गाउँ घरमा गोठ धुप गरिन्छ। गोठधुप गर्दा खिर पकाएर खाने चलन छ।
दसै वास्तविकता मा पछि न्वारन गरिएको नाम हो। दसै हुनुभन्दा पहिला सायद न्वागी हुनुपर्छ। त्यही न्वागिलाई हिन्दु सस्कृतिले विजया दसमी बनाइदिए को हो। न्वागी को अर्थ नया वाली भित्र्याउदा प्रकृति र पित्रीलाई नया अन्न समर्पण गर्नु हो। यो कुनै युद्द विजयको पर्व नभएर न्वागी पर्व हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस्मा हिन्दु सस्कृतिले व्यापक अतिक्रमण को कारण न्वागी पर्व ओझेलमा पर्न गयो। प्रकृति र पित्री लोप हुन पुगे र हिन्दु देवि देउता राम,दुर्गा जोडिन पुगे। रातो रगत र तेस्को प्रतिकको रूपमा रातो रङ्ग पहिचान बन्न थाले। दहि र चामले मुछिए को टिकामा रगत को प्रतीकको रूपमा रङ्ग मिसिन थाले।
दसै वहिस्कार गर्नु केही हदसम्म जायज होला। तर यतिले मात्रै हामिले पर्याप्त उपलब्धि पाउन सक्दैनौं । दसैले थिचेको हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक पर्व न्वागी लाई पुनर्जीवन प्रदान नगरेसम्म दसै पलायन हुन सक्दैन। दसैसंग टाढा हुनको लागि हाम्रो युग बोकेर सिथिल बनेको चाडलाई छिटोभन्दा छिटो जीवन प्रदान गरे* पछि,उधौली/उभौलीको वास्तविक अस्थित्व प्रकासमा आए पछि मात्रै दसैले हामीबाट विदा लिने छ। दसै हामिबाट जनु र नजानुमा किरात समुदाय र किरात सस्कृती नै कारक तत्व हुनेछ।
दशैं केही भ्रम केही यथार्थ ।
दशैंमा एक दिन विदा होस् । न तास खेल्न पाउँथे । न पिङ खेल्न । न ससुराल जान पाउँथे । न मामाघर जान पाउँथे । न त यी खस बाहुनले मौलो पुजा गरेर पैंसा हाम गर्न पाउँथे । दशैं राज्यले नमनाउने हो भने के हविगत हुन्थ्यो खस बाहुनको ? दशैं व्यापार, दशैं शक्ति सलला रसाएर घुरेनमै बग्थ्यो ।
तर दशैं आदिवासी जनजातिले पनि मान्नु परेको यथार्थ भनेको राज्यशक्तिको दमनशोषण नै हो ।
दशैंमा १ महिनाको कर्मचारीलाई बोनस, सरकारले नै दशैंको नाममा एक महिनाको बोनस तलब दिएपछि किन नमानाउने दशैं ।
दशैंमा १५ दिन स्कूल छुट्टी पढाई नभएपछि के गर्ने अनि हिन्दूले जे जे गर्छन् त्यही नगरी के गरुन् बच्चहरु ।
दशैंमा ५ दिन कर्मचारीलाई छुट्टी दिएपछि घर किन नजाउन त कर्मचारी । सधैं छुट्टी पाइने होइन अनि यहीबेला ठूलाबढाको आशिष थाप्न किन टिका नलगाउने त ?
दशैंमा मौलो पूजाको लागि प्रत्येक गण, कोतमा राँगा र पूजा सामाग्री अनि पुरेत खर्च छुटाउनको साथै दशैं भोज सरकारले दिन्छ त सेना प्रहरीले दशैं पूजा किन नगरुन् ।
दशैंमा नै गुठीसंस्थानले विभिन्न मठमन्दिरमा दशैं पूजा खर्च बाँड्छ किन नगरुन् त नवादुर्गा पूजा मन्दिर मन्दिरमा गुठी कर्मचारीले ।
दशैं मान्नको लागि आर्मीलाई राज्यले निर्देशन दिएको छ गोर्खाबाट काठमाडौंमा फुलपाती भित्राउन सरकारले आर्मी परिचालन गर्छ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर ।
दशैंमा सुनुवार (१२ र १० किपटीय)ले पनि पहिला पहिला जिउँदै मजुर, मृग, कालिज, डाँफे, मुनाल, घोरल शाह तथा राणाहरुलाई घर घरमा पु¥याइदिनु पथ्र्यो । पछि उनीहरुलाई सिकारी पल्टनमै आबद्ध गरियो । अहिलेको रामेछाप भीरपानी र ललितपुरको ठूलो दुुर्लुङ अनि मकावनपुरमा बसोबास गरेका सुनुवारहरु त्यसैसमय सिकार विर्ता पाएर बसेका हुन् ।
दशैं त कोइँच सुनुवारले मनाउने कुरा भएन । तर आफ्नो चाडमा पाँच ५ दिन छुट्टी नपाइने हुँदा कतिपय जातिले यही दशैंको बेला आफ्नो चाडपर्वलाई पनि सम्मिलन गरेको देखिन्छ । जस्तै कोइँचहरुले दशैंकै बेला सिदा पिदार गर्नु, विवाह लगायतका विभिन्न कार्यको करकोसेली बुझाउनु, ठूलाबढाको आशिर्वाद थापेर आफन्तजनसँग भेटघाट गर्नु । कसैले छेँगु पिदार र न्वागी पनि यहीबेला गर्ने गर्दाछन् । स्वाभाविक रुपमा हामीले व्यवहारिक कुरालाई हेर्दा सरकारी काम विदा हुनु अगावै गर्छौं भने सामाजिक काम विदामा पारेर गर्छौं । क्लब, सामाजिक संस्था, साहित्यिक तथा अन्य गोष्ठीहरु विदाको दिन पारेरै गर्छौं सजिलोको लागि । हो कोइँचमा पनि यस्तै यस्तै गर्दा गर्दै दशैंको बेला सिदा पिदार र तिहारको बेला सुरोम पिदार गरिएको हुनसक्छ । सुनुवारले हिजोआज दशैं तिहारमा हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई भने विर्सेको देखिन्छ । र, दशैं मात्र मनाउने गरेको देखिन्छ । यसैले आदिवासी जनजातिहरुका चाडपर्वहरु कतिपय सन्दर्भमा हिन्दू चाडपर्वमा सम्मिलन भएका छन् । हिजोआज कतिपय समाजशास्त्री, आदिवासीविज्ञहरु अन्धाधुन्दा हिन्दूधर्मका चाडबाड बहिस्कार गर्न उफ्ररी पाफ्री लागेको देखिन्छ । बहिस्कार गर्नको लागि पनि परिवर्तनको आधारहरु आवाश्यक छ भनेर कसैले खोेकेको लेखेको पाइएन । यो नै ती सामाजशास्त्रीहरुको भूल हो । समाज विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । हामी परिवर्तनको मोडमा छौं । यसमा कोही निरास र हतोत्साही हुनु पर्दैन । दशैंतिहार हाम्रो चाड होइन । तर दशैं र तिहारमा कतिपय हाम्रा परम्परागत चाड सम्मिलन भएका छन् । यो कुरा मनन गर्नु आवाश्यक छ । पहिला कोइँचले दशैं नमनाए कारवाही हुन्थ्यो । त्यसैले दशैंको नवमीमा पशु बली दिएको रगत हातमा दलेर दशैं मानेको प्रमाण घरको ढोकाको दायाँबायाँ हत्केलाको छाप हान्नु अनिवार्य थियो । अहिले पनि कात्तिकमा फेरि लगाउने जोगी आउँछ । यि जोगीहरु पृथ्वीनारायणले सिआइडि खटाका व्यक्ति हुन् आफ्नो राज्य विस्तार गर्न । तर हामीलाई त्यत्ति पनि था छैन अझै पनि फेरि लाउने जोगी आएन ग्राहदशा मन्साउनु पर्ने, भूतप्रेत भगाउँथ्यो कहाँ मरो भन्छम् । जोगीहरु नाथ सम्प्रादयका खस हुन् । यिनीहरु कार्तिक र चैतमा डुल्छन् । उनीहरुको जागीर गए पनि परम्परा बनेर अझैरहेको छ । जसरी दशैंलाई अहिले राज्यले मान नभने पनि परम्परा बसेको छ । तर हामीले बुझेपछि विस्तारै छाड्दै जाने हो । जादुको छाडी जस्तो आजको आजै हुँदैन । तर राज्यले भने प्रक्रियागतरुपमा कुतनैतिक पाराले दशैं मान्न लगाइरहेको छ ।
यो कुटनैतिक कुरालाई कानुनमा उल्लेख गरेर व्यवस्था गरिदिएको छ । जुनसुकै देश होस् त्यस देशको कानुनको मुल जरा भनेको परम्परा हो । शुक्रवार गुड फ्राइडे मुस्लिम परम्परा । युरोपमा आइतावर र सनिवार क्रिस्चियन परम्परा । नेपालमा शनिवार शनि ग्रहको शान्तिको लागि हिन्दू परम्परा । यसैले नेपालको कानुन पनि हिन्दू परम्परामा मात्र आधारित छ । यसैले किरात लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरु मारमा परेको हौं । हामीले हिन्दू धर्मको विरोध गरेको होइन । हामीले राज्यले कुनै एक धर्मलाई काखमा राखेर अन्य धर्मलाई पाखा लगाउनु हुन्न भनेको हो । यो राजनीतिक कुरा हो । जबसम्म राजनीतिक सचेतना हामीमा आउँदैन, दशैं जस्ता धेरै चाडले हामीलाई दुहुना गाई बनाइराख्छ । यो यथार्थलाई सबैले मनन् गर्ने हो कि ?
मालिङ्गोको बोटमा मौलाएको फेन्चेम माया : इलामे कोइँचको पवित्र हरित मनसँग
खस्रुको बोटमुनि गाईगोरु, बाख्रा चराएर गोठाले जीवन बाँचेका कोइँचहरु, मालिङ्गो घारीमा मायालाई क्योङ्मा खिपेर हाँसेका डाकेडाले कोइँचहरु, बिटे आलुमा फेन्चेम माया चोपेर जिन्दगी धानेका एर्म कोइँचहरु । मेची राजमार्गको किनारमा दिनाहु दुध ओसार्दै उकालीओराली खेपेका कोइँचहरु । अब आफ्नो दैनान्दिनी, जीवनशैली र संस्कृति पाहुनालाई पस्किने सपना बुनीरहेका छन् ।
हुन पनि इलाम घुम्नेहरुका लागि पुवा मझुवा कोइँच गाउँ पुगिएन भने इलाम गएको कुनै सार्थकता हुँदैन ।
इलामका पर्यटनविद् तथा सञ्चारकर्मी धर्म गौतम भन्नुहुन्छ, मलाई इलाममा एउटा कुरा खट्कीरहेको थियो, इलाम पुगेर घर फर्किँदा घरमा वा आफ्नो मायालुलाई चिनो के लैजाने ? त्यस्तो सम्झना रहीरहने चिनो इलाममा केही थिएन । जो आए पनि चिया, ललीपप, छुर्पी लिएर जाने । लाग्यो खायो सकियो । खप्ने खालको चिनो के हुनसक्छ भनेर मनमा कुरा खेलीरहेको थियो । त्यो अभाव कोइँच गाउँको हेण्डिक्राफ्टले पुरा गरेको छ । हाम्रा कोइँच दाजुभाईसँग यस्ता राम्रा राम्रा हेण्डिक्राफ्ट रहेछ । यसलाई प्रोमोट गर्न सकिन्छ ।
पुख्र्यौली थलोमा निख्रीसकेको परम्परागत सीप अझै इलाममा जीवित रहेकोछ । पानी नचुहिने, भुने, डेली, सोली, थुन्से, नाङ्लो, डोको, डालो बुन्ने कोइँच इलाममा छँदैछन् । मायालुको अमर चिनो प्लेँकास, क्योङ्, लुजेबास, माचिङ्गा बास यहाँका कोइँचले बनाउन छाडेका छैनन् । वार्दे, दुवाँली थापेर सिकार गर्ने चलन जीवित छँदै छ । त्यति मात्र होइन आधुनिक कृषि प्रणालीमा पनि पोख्त छन् । नगदेबालीहरु लगाउन पौरखी हातहरु माटोसँग सल्बलाइरहेका छन् । हेर्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ । शहरबजारको व्यूटीपार्लरमा गएर पार्टीमा चिटिक्क परेर हिड्ने कृत्रिम सुन्दरीभन्दा सयौं गुण सुन्दर देखिन्छन् इलामे कोइँच युवायुवतिहरु । कसरी आफ्नो सौन्दर्य स्याहारसंभार गरे होलान् ? पुख्र्यौली थलोका युवायुवातीहरुले शहरबजारको सुन्दरतासँगै पढ्नलेख्न, खेतीपाती, व्यापार व्यवासाय र पुख्र्यौली पेशा कसरी जीवित राख्ने भन्ने शिक्षा सिक्न इलाम, पाँचथरको सुनुवार गाउँ एक पटक पुग्नै पर्ने हुन्छ । परम्परागत पेशालाई गर्वसाथ युवा पुस्ताहरुले अँगालीरहेका छन् इलामे हरित पवित्र मनका कोइँचहरुले ।
२०७१ साल वैशाख । पुवा मझुवाको कोइँच गाउँ, चैते । शाँदार पिदारमा कम्मर मर्काई मर्काई नाचेको याद ताजै छ । म र मेरो साला राजेश सुनुवार (हाल सुनुवार सेवा समाज कतारका सचिव हुनुहुन्छ ।) टी सर्टको भरमा पाँचथर शाँदारथानको सुसेस भवन उद्घाटन गर्न फिदिम नाम्दोखोला गएका थियौं । तर कोइँच संस्कृति सम्बन्धि अन्तरक्रिया भएको हुँदा शाँदारपिदारकै दिन पुवा मझुवा चैते आइपुग्नु पर्ने भन्ने तत्कालीन अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारको खबरले भवन उद्घाटन गर्ने वित्तिक्कै हामी, बुद्ध मुखिया सिवा, बुद्ध मुखिया लुम्दे, राजेश सिरहा र म हिड्दै पौवा भन्ज्यङ पुगेर ट्रक चढेर राँके पुगियो र त्यहाँ बागखोरसम्म चार सयमा ट्याक्सी रिजर्भ गरी पुवा मझुवा चैते पुग्यौं । हामी पुग्दा शाँदार पिदार सकेर मन्दिरबाट हिड्न लाग्नुभएको रहेछ । बेलुकी चैत शुशुच कोइँचको घरमा क्याम्प फायरसहित अन्तरक्रिया भयो । लेकको ठाउँ जाडोले इन्तु न चिन्तु बनायो र लुम्दे बुद्ध मुखियाको कोट मागेर ओड्दै अन्तरक्रिया गर्दाको क्षण जति अविस्मर्णीय थियो । खोइ कुन्नि किन हो ? यो मनलाई च्वस्स चिमोटीरहेको छ पुवा मझुवाको कोइँच गाउँले । झरिलो सिस्नुले झम्झमाए जस्तै मन फेन्चेम रनाह रहीरह्यो आजसम्म । यस वर्षको कोइँच इको कल्चरल टुरिजम भिलेज स्थलगत भ्रमणमा झनै धेरै कुरा पुवा मझुवाले सिकायो । मालिङ्गोको बोटमा मौलाएको फेन्चेम (चिङ्फिङ) माया अति रसिलो बनेर यो मनमा झाँगिएको छ । इलाम घुम्नुको सार्थकता पुवा मझुवाको कोइँच गाउँ घुमेपछि मात्र पुरा हुनेरहेछ, मन त्यसै त्यसै पुलकित भइरहेछ फेन्चेम मायामा ।
मनमा लागेको खुल्दुली (केही साथीहरुको जिज्ञासको उत्तर)
अरुलाई होइन आफैंलाई सोधौं साच्ची म चि के गरीरहेछु समाजलाई भोलिको पुस्तालाई ।
हाम्रा कोइँच सुनुवार दाजुभाईको कुरा नि- कविता लेख्छन्, कथा लेख्छन्, गजल लेख्छन्, रुवाई लेख्छन् । हेर्छन, मस्किन्छन् फुर्किन्छन्, अहा कति राम्रो लेखेँ । अरुको भन्दा अब्बल छ मेरो कविता, कथा, गीत । वा वा वा । छोइ नसक्नुको । छाप्दैनन् । हिजोआज त झन सामाजिक सञ्जालले त्यो सुविधा दिएकै छ । हामी त्यस्ता छौं, कोइँच सुनुवारहरु । आफैं हेर्छौं, आफैं पाठक । आफैं शल्यक्रिया गर्छौं कविता, कथा, उपन्यासको, आफैं समालोचक । आफैं बजार अनुसन्धान गर्छौं, आफैं बजार व्यवास्थापक । आफैं खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउँछौं अनि आर्फै प्रकाशक, डिजाइनर । अनि आफैं हरेस खन्छौं ।
तर खस बाहुनहरु शुरुमा लेख्न नजान्ने भएर निस्कीन्छन् । कविता लेख्छन्, गीत लेख्छन्, उपन्यास लेख्छन् । पढ्न दिन्छन् । देखाउँछन् । सच्याइदिन अनुरोध गर्छन् । समसमायिक भयो भएन भन्छन् । सर यो कस्तो छ बनाइदिनु न । बनाइदियो मेरो कविता कति राम्रो बनाइदिनुभयो सरले भन्छन् । छाप्दै जान्छन् । जान्ने बन्दै जान्छन । निरन्तरता दिन्छन् । अन्तिममा राष्ट्रिय कवि बन्छन् उपन्यासकार बन्छन् । समालोचक बन्छन् । सम्पादक बन्छन् । प्रकाशक बन्छन् । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्यि नाम कमाउँछन्, दाम कमाउँछन् । इज्जत हुन्छ । मज्जाले घुम्छन् घुमेकै छन् । र, सहयोगी, मिलानसार बनेर विद्वन बनेर हामी माझ नै निस्किन्छन् । हामीले सिकाएका खसबाहुन भाइबहिनीहरु, हाम्रै खसबाहुन साथीहरु ।
हाम्रोहरुलाई लेख न लौ छाप्नु प¥यो भन्यो शुरु मै पैसा कति पाइन्छ पो भन्छन् । जान्ने बन्छन् । उनीहरुले लेखेको लेख, कविता, गीत, कथा त सच्याइदिनु नै हुन्न । खप्न नसक्ने गरी गाली गर्छन् । कति न राष्ट्रिय लेखक भए जस्तो अबदेखि आर्टिकल नै दिन्न भनेर धम्की दिन्छन् । उल्टै कति न जान्ने समालोचक भएर, त्यस्तो पनि कविता हो, उपान्यास हो भनेर खोक्छन् । सुनुवारमा समालोचक त परै जाओस् पुस्तक समिक्षक समेत अहिलेसम्म डा. लाल रापचा बाहेक अरुले गरेको भेटेको छुइन । उहाँ भने खसबाहुन जस्तै हुनुहुन्छ (लेखरचना लेख्ने दिनेमा मात्रै नि) । भन्ने वित्तिकै लेख रचना दिइ हाल्नुहुन्छ । मेरो “देन ए सेरेम फु” पहिलो कोइँच भाषाको कविता संग्राहको समिक्षा पनि उहाँले नै गर्नु भएको हो गरिमा साहित्यीक पत्रिकामा । गजलकार भानु सुनुवारले डा. लाल रापचाकै नाम लिएर गाली पनि गर्नु भो मलाई, भनेको भोलि पल्टै डा. लाल रापाचाले लेख पठाई दिनु भो, तपाईँलाई एक महिना अगाडिदेखि “भनेको आजसम्म पनि छैन कति ठूलो फर्केको ।” अनि मैले नतमस्तक जवाफ दिनु कर लाग्यो “मलाई पनि त स्वतन्त्र लेख माग्नुभएको भए अहिलेको अहिले नै दिने थेँ ।” हुन पनि मलाई सुनुवारको सबै कुरा आउनु प¥यो भनेर लेख मागियो । सुनुवारको सबै कुरा खोज्दा खोज्दा मेरो त बाह्र बज्यो । ढिलो भो । १० १२ दिन अगाडि मात्र सुनुवार सेवा समाज कतारबाट निस्किने पत्रिका होमाचिरिमा लेख पडाएँ । यही हो खस बाहुन र सुनुवारमा भिन्नता । यस्ता छन् हाम्रा मान्छे । Read the rest of this entry »
जब जब महिला अधिकारको सवालहरु आउछन यो ३३% महिला अधिकारको कुरा गरि रहदा मलाइ सधैं जसो यो बाक्लो दिमागमा आदिवासी महिलाहरुको अधिकारको कुरा तेर्सिएर आउथ्यो कि हामी आदिवासी महिलाहरुको अधिकार कहिले सुनिश्चित होला र हामी जनजाति महिलाहरुको चेतना कसरी आउला भनेर अनेकन प्रस्न घुमी रहन्थ्यो यो मानसपटलमा ,तर आज मेरो सबै कुराको समाधान भएर आए जस्तो महसुस भयो किन कि त्यो सबै मन भित्रका इच्छाहरुलाई वकालत गर्ने एउटा अदालतको रुपमा इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले हामी माझ “पहिचानको खोजी” नामक पुस्तक सार्बजनिक गरेको छ र आज नै मेरो हातमा परेको छ र मैले आफुलाइ रोक्न सकिन सरसर्ती पल्टाइ पनि हाले खुसी लाग्यो यो किताब भित्र आदिवासी महिलाहरुको खुराक अनि एउटा दरिलो स्तम्भ खडा भएको महसुस गरे। यो पुस्तकमा आदिवासी महिलाहरुलाइ न्याय गरेको पाए उनिहरुको बौद्धिक , धार्मिक , सास्क्रीतिक ,मौलिक, बिबिधताको महत्त्वपूर्ण कुराहरु समेटिएको पाए। राजनिती सास्क्रीतिक सामाजिक र रास्ट्रीय स्तरमा जनजाति महिलाहरुको सन्दर्भ बिमर्शलाई खुबै जोड दिएको पाइयो। पुस्तक भित्र धेरै लेखहरु समाबेश थिए समग्र आदिवासी महिलाहरुको जिवनशैली रहनसहन पेशा जस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो र अधिकारको लागि सडक आन्दोलन शिक्षा चेतनाको खोजी जस्ता कुराहरुले साच्चिकै केही हदसम्म हामी जस्ता आदिवासी महिलाहरुलाइ ब्युझाउछ कि भन्ने सकारात्मक पक्ष बोकेको पनि अनुभव गरे। केही मेरो ब्यक्तिगत खड्केको कुरा यसमा २०१६ देखि २०७३सम्म पचिस वटा बिबिध लेखहरुमा केही आदिवासी महिलाहरुको मात्र लेखहरु समेटिएको पाए ।५९ जनजाति महिला सस्थाहरुमा २५ आदिवासी महिलाहरुको कुरा मात्र उठेको पाए र जब आदिवासी महिला भित्र पनि सिमान्तक्रुत अति सिमान्तकृत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जस्ता महिलाहरु छन तर उनिहरुको त्यति लेखहरु आएको पाइन जो अलि प्रकाश मा छन त्यो मात्र आएको हो कि भन्ने मेरो भान मात्र हो। सबै महिलाहरुको मात्री सस्थाहरु सग सहकार्य गरेर सबैलाइ समेटेको भए झन सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि? आशा छ अब आउने अर्को अंकमा लिखु पारी वारिका महिलाहरुको जीवन शैली , थाक खोलाको थकाल्नी जस्ता लेखहरु समेटिएर सबै जातीय महिलाहरुको पहिचान सहितको लेखहरु आउने आशामा छु। यो भित्र मलाइ चित दुखेको कुरा जुन यश भित्र भोजपुरे रैनी भनेर श्रीकृष्ण जोशिले राइनी महिलाहरुको नजान्दो पाराले अलि होच्याउने दुस्साहस गरेको देखे राइनिहरु आफ्नो स्वार्थको लागि जस्लाइ पनि चेपारो बोली लगाइ फसाउने जस्तो कुरा बाल बिबाह गर्नु आफ्नो पेटमा गर्व हुँदा पनि अर्को केटा सग जाने प्रथा हाट्बजारमा जो सग पनि लाग्नु अनि पोइलाइ जानू र गएको स्वास्नी फेरि फर्काएर लिने चलन हुन्छ भनेर राइनी दिदिबहिनी हरु मात्र होइन सबै आम जनजाती दिदिबहिनी हरुको इज्जतमा पतङ्ग उडाएको जस्तो लाग्यो किन कि उहाँ त बाहुन न पर्नु भयो नगरे जस्तो गरेर तिर त हानेकै हो नि ।यो गल्ती उहालाइ लेख लेख्न दिनुमा भयो कि जस्तो लाग्छ।तर उहाको जबाफ थुलुङ्प्रसाद मान राई ज्युले बजारेर दिनु भएको छ सायद अब यस्तो लेख्ने दुस्साहस कुनै अरु जोशी हरुबाट हुँदैन होला। अन्तमा यो इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन ले प्रकासक गरेको पहिलो किताब आदिवासी महिलाहरुको मेरुदण्ड नै हो आउने दिनहरुमा पनि यस्त पुस्तकहरु बजारमा आउने आशा गर्दै अझै पनि अरु प्रगती होश भन्न चाहन्छु । अनि हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्दछु सम्पादकीय कैलाश राई ज्यु र लेखक ज्युहरु सबैलाइ अनि प्रकासक टिम इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनलाई शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
सुनुवार समाज केन्द्रिय समिती
Posted in Articles | Tags: शोभा सुनुवार | 1 Comment »